ကနေတဲ့ လူပုလေး (မြင့်သန်း) | လမ်းအိုလေး
ကနေတဲ့ လူပုလေး (မြင့်သန်း)
July 26, 2014 by lanolay	Leaveacomment
မင်းအနေနဲ့ နိုင်ချင်သလောက် နိုင်လို့ရမယ်။ ဒါပေတဲ့ ရှူံးတယ်ဆိုတာက တစ်ကြိမ်တည်းပဲ။ ရှူံးရင် ပြီးသွားတာပဲ။ မင်း ရှူံးကို ရှူံးရဦးမှာ။ တစ်နေ့ ရောက်လာလိမ့်မယ်။ ငါကတော့ မျှော်နေမယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ကြာကြာ
မူရာကာမိ၏ ကျော်ကြားသော စမ်းသပ်အရေးအသားတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကျော်ကြားရသည့် အချက်တစ်ခုမှာ အရေးအသား တည်ဆောက်ထားသော ရပ်ဝန်း၏ မရေရာမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ တကယ့်ဘဝ (နေ့စဉ်ဘဝ)နှင့် အိပ်မက်တို့၏ အကြားတွင် စည်းရိုးပါးပါးကလေး ချထားကာ ထွေပြားစေခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤသို့သော အရေးအသားမျိုးတွင်၊ ကာလတရားမှာ တစ်ပြေးတည်း ဖြစ်သည်။ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်တို့ကို သရုပ်မှန်ဟု ခေါ်ကြသော ရီရယ်လစ်ဇင် အဖွဲ့များတွင်ကဲ့သို့ ကန့်သတ်ပြောဆိုရန် မဖြစ်။ ထို‘အချက်’ကို ဝေဖန်ရေး မလုပ်နိုင်။ ထို့အတူ ‘ဖြစ်နေခြင်း’နှင့် ‘ဖြစ်နေခြင်း၏ အတွင်းမှ ဖြစ်နေကြခြင်း’ကို တစ်ကြိမ်တည်း တစ်ပြိုင်နက် ဖော်ထုတ်သော အရေးအသား ဖြစ်သည်။ ဝတ္ထုတိုဆို ဒီလိုမှဟူသော အစဉ်အလာပေတံနှင့် တိုင်းတာကာ ဖတ်လေ့ရှိသော၊ ‘ဖေတော့မောင်တော့ ကြိုက်’များ သဘောကျနိုင်မည် မဟုတ်သော ဝတ္ထုတိုမျိုး ဖြစ်သည်မှာ သေချာပေသည်။
(The Dancing Dwarf by Haruki Murakami. Eng trans: Jay Rubin.
ဟရူကီ မူရာကာမိ ၏ ပြတင်းတစ်ပေါက်နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ – မြင့်သန်း။ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၄။ နှစ်ကာလများ။)
Click to share on Random Post (Opens in new window)
Categories: Prose, Short Stories | Tags: ဘာသာပြန်, ဟာရူကီ မူရာကာမီ, မြင့်သန်း, ၀တ္ထုတို, Haruki Murakami, lanolay, Myint Than, Short Stories | Permalink.
Archives Select Month January 2018 (6) December 2017 (3) October 2017 (1) September 2017 (2) August 2017 (3) July 2017 (5) April 2017 (5) December 2016 (1) February 2016 (3) January 2016 (6) October 2015 (3) September 2015 (5) August 2015 (8) July 2015 (5) May 2015 (17) April 2015 (5) March 2015 (6) January 2015 (4) December 2014 (8) October 2014 (7) September 2014 (18) August 2014 (19) July 2014 (17) June 2014 (7) May 2014 (29) April 2014 (18) March 2014 (7) February 2014 (1) January 2014 (6) December 2013 (7) November 2013 (22) October 2013 (1) September 2013 (1) August 2013 (6) July 2013 (53) June 2013 (35) May 2013 (6) April 2013 (1) March 2013 (10) February 2013 (5) January 2013 (18) December 2012 (9) November 2012 (1) October 2012 (2) August 2012 (2) July 2012 (7) June 2012 (8) May 2012 (4) April 2012 (26) March 2012 (8) February 2012 (2) January 2012 (7) December 2011 (25) November 2011 (20) October 2011 (1) September 2011 (13) August 2011 (6) July 2011 (1) June 2011 (8) April 2011 (13) March 2011 (24) February 2011 (28) January 2011 (13) December 2010 (4) November 2010 (19) October 2010 (16) September 2010 (187) August 2010 (270) July 2010 (48) June 2010 (100) May 2010 (7) March 2010 (5) February 2010 (4) January 2010 (12) December 2009 (4) November 2009 (2) October 2009 (17) September 2009 (9) August 2009 (21) July 2009 (15) June 2009 (21) May 2009 (12) April 2009 (2) February 2009 (6) January 2009 (19) December 2008 (10) November 2008 (6)
Aung Cheimt ebook Essay Haruki Murakami Kabyarz Khin Aung Aye Khin Zaw Myint KYPHL L=A=N=G=U=A=G=E lanolay maung day maung yu py Mg Chaw Nwe Minimal modernist poetry moe way nay myo Nyein Wai post modern Prose Sai Win Myint Short Stories Thit Sar Ni TKMH TYMW zaw zaw aung Zeyar Lynn ခင်ဇော်မြင့် ခရမ်းပြာထက်လူ စိုင်းဝင်းမြင့် တကယ်မရှိတဲ့အရာ တစ်ယောက်တည်းစကား တာရာမင်းဝေ ပိုင် ဘာသာပြန် မိုးဝေး သစ္စာနီ သုခမိန်လှိုင် ဟာရူကီ မူရာကာမီ ဇေယျာလင်း ဇော်ဇော်အောင် နေမျိုး မောင်ယုပိုင် မောင်ချောနွယ် မောင်ချောနွယ်အတု မောင်ဒေး အောင်ချိမ့် မြည်နေတဲ့ ထရမ်းပက် ၀တ္ထုတို ငြိဏ်းဝေ
စိန်ဂေါ်လီတစ်ယောက် - ၂ (စိုင်းဝင်းမြင့်﻿)
ကျွန်တော့်ရဲ့ ယခုအချိန်နှင့် အခြားမငြိမ်မသက်မှုများ (လှသန်း)
ကြယ်ပြာလေးနဲ့ ထမင်းစားပြီးတဲ့နောက် (မောင်ချောနွယ်)
Phone Myint on ကဗျာ (သုခမိန်လှိုင်)
လာလာလေ တူးကြ –… on မရဏဖျူး(ဂ်) (ဇေယျာလင်း)
ကျွန်တော်ဟာ ဘာ့ကြောင… on ကျွန်တော်ပန်းချီဆရာဘာကြောင့်မဟ…
Ba Gyi Aung on ပဋိပစ္စည်း (​မောင်​​ဒေး)
ကောင်းခန့်ကျော် on ၁၉၉၀ အထူးသီးသန့်​ (သီဟသူ)
၂၉၊ ဇှနျဟိုးအတိတျဆီက ငါတဈယောကျကိုနှေးထှေးကွညျမှစှေ့ာပွနျတှလေို့ကျရပွနျတယျ။ တူမလေး ပြျောပါစေ...
Hide Out • Paing Nyan
လူလုပျမှတျဉာဏျ - ၁၂
TH03 HTAN3 [aNTIMa]
ငါမရှိလည်း ” ငါမရှိခြင်း “က အခန်းထဲ …
လူများ၊ သက္ကရာဇ်များ – ကဗျာ
Maung Day’s Blog
အခွံက ထွက် လာတဲ့ အခါ အခွံ ဟာ ဘာ အခွံမှန်း?
The Poetry Hive (ကဗျာသိုက်﻿)